आमा बन्दै ३ नेपाली नायिका । « गोर्खा आवाज
आमा बन्नु जीवनकै सबैभन्दा सुन्दर अनुभूती हो । मातृत्वपछि तपाईंको जिन्दगी सधैका लागि पूर्ण रुपमा बद्लिन्छ । यो परिवर्तन पनि आफैमा प्रिय हुन्छ । यद्यपि कतिपय कुराले भने तपाईंलाई असहज पनि बनाउँछ ।त्यसो त गर्भावस्थामा छँदै परिवार, आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाईले तपाईंलाई आ–आफ्नो अनुभव र बुझाई साझेदार गर्छन् ।
गर्भावस्थामा के हुन्छ, प्रसूती व्यथा कस्तो हुन्छ, बच्चा जन्माइसकेपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर बेलिबिस्तार लगाइसकेका हुन्छन् । यद्यपि जब तपाईं आमा बन्नुहुन्छ, तब केही यस्ता अनुभव गर्नुहुन्छ जुन कसैले बताएका वा सुनाएका हुँदैनन् ।
१. नायिका प्रियंका कार्की – नायिका प्रियंका कार्की गर्भवती भएकी छिन् । प्रियंकाले आफु गर्भवती भएको कुरा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् । प्रियंकाले गर्भवती भएको तस्बिर फेसबुक र इन्स्टाग्राममार्फत् आफू गर्भवती भएको खुलाएकी हुन्।
पोस्टमा आफ्नो र श्रीमान आयुष्मान देशराज जोशीको फोटो सेयर गर्दै प्रियंकाले लेखेकी छन्, ‘अब तपाईंहरू मलाई सोध्न छाड्नु भए हुन्छ! हो, हामी गर्भवती छौं। भन्दै ‘फेसबुक र इन्स्टाग्राम मार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन् । केही समय अघिदेखि सामाजिक सञ्जालमा उनी गर्भवती छन् कि भन्ने विषयमा चर्चा चलेको थियो ।
उनका शुभचिन्तक तथा फ्यानहरूले उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नदेखिएको र पोस्ट गरिएका फोटोमा मोटाएको देखिएको जस्ता कुरालाई आधार बनाएर प्रियंका गर्भवती भएको हो कि! भन्ने अड्कल काटेका थिए। प्रियंका र आयुष्मानले एक वर्ष पहिले विवाह गरेका थिए ।
२. नायिका ऋचा शर्मा-यस्तै नायिका ऋचा शर्मा आमा बन्ने भएकी छन् । चर्चित रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियनकी निर्णायकसमेत रहेकी शर्माले आफू आमा बन्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा श्रीमान् दिपेक्षविक्रम राणासँग सजीवनको रुखमा पानी हाल्दै गरेको तस्वीर सेयर गर्दै शर्माले सबैसँग आशिर्वादको अपेक्षा गरेकी छन् ।
उनी अगाडि थप्छिन्, ‘त्यही प्यारो जीवनको स्वागत गर्दै घरको दैलोमा म र मेरो श्रीमानले यो सजीवनको रुख रोप्दैछौं । यो नयाँ जीवनको आगमन र यो रुखको अटूट साथ सधै बनिरहोस् भन्ने तपाईहरू सम्पूर्णको आशीर्वादको अपेक्षा गर्दछु ।’ नायिका शर्माले गतवर्ष बितेकी आफ्नी आमालाई सम्झँदै लेख्छिन्, ‘आमा पनि पर क्षितिज बाट भन्दै हुनुहुन्छ होला, ‘छोरी आज ठुली भई ।’’ ऋचा र दिपेक्षको गतवर्ष मंसिरमा विवाह भएको थियो ।
३. नायिका गरिमा पन्त- नायिका गरिमा पन्त आमा बन्ने भएकीछन् । पन्तले समाजिक सञ्जालमा फाटो राख्दै आफु आमा बन्न लागेको जानकारी गराएकी हुन् । गरिमाले केही बर्ष अगाडि बेल्जियममा रहेका हरि थपलियासँग प्रेम विवाह गरेकी हुन् । प्रेममा रहेको केही बर्षपछि उनीहरुले विवाह गरेका थिए ।